Banyere Anyị - Suzhou Kudi Trade Co., ltd.
Suzhou Kudi Trade Co., ltd. bụ otu n'ime ndị kasị ibu emepụta nke Pita ejiji ngwá ọrụ na retractable nkịta leashes na China na anyị na-pụrụ iche na a na ubi ihe karịrị afọ 19. Anyị factory emi odude ke Suzhou, nke bụ naanị ọkara otu awa n'ụzọ ụgbọ okporo ígwè si Shanghai Hongqiao Airport. Anyị nwere ụlọ ọrụ aka abụọ nke kachasị maka ngwa eji azụ anụ ụlọ na nkịta nkịta a na-apụghị ịgbanwe agbanwe, akwa olu na ihe egwuregwu ụmụaka nwere ngụkọta mmepụta ihe karịa mita 9000. Anyị nwere WALMART Walgreen, Sedex P4, BSCI, BRC na ISO9001audit ect. Anyị nwere ndị ọrụ niile gburugburu 230 ruo ugbu a.
Anyị nwere ugbu a gburugburu 800 sku na ihe iri atọ na atọ. Dị ka anyị dị ọhụrụ ugbu a bụ igodo nke ngwaahịa a, yabụ kwa afọ, anyị ga-etinye 20% nke uru anyị na ihe R&D ọhụrụ ma mepụta ngwaahịa ka mma maka anụ ụlọ. Ugbu a, anyị nwere gburugburu 25 ndị ​​mmadụ na R&D tem na ike chepụta 20-30 ọhụrụ ihe kwa afọ. Ma OEM na ODM na-anabata na anyị factory.
Ọzọkwa mma bụkwa ihe anyị lekwasịrị anya na ya. Anyị na-enye ndị ahịa anyị afọ abụọ maka ngwaahịa iji hụ na anyị dị mma.
Ndị ahịa anyị sitere na mba 35 na mpaghara. EU na North America bụ isi ahịa anyị. Anyị ejeela ozi karịa ndị ahịa 2000, gụnyere Walmart, Walgreen, Central & Garden Pita wdg Anyị ga na-eleta ndị ahịa anyị mgbe ụfọdụ ma gbanwee ha na atụmatụ ha ga-eme n'ọdịnihu iji hụ na imekọ ihe ọnụ ga-adịte aka.
Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ inye anụ ụlọ ịhụnanya ọzọ, iji nyocha na ịzụlite ngwaahịa ndị ọhụrụ, mepụta ndụ na-adaba adaba ma dịkwa mfe maka ndị mmadụ na anụ ụlọ. Anyị nwere obi ụtọ ịnye ndị ahịa anyị ngwaahịa mara mma yana azịza ndị bara uru na nke akụ na ụba maka ndụ ha kwa ụbọchị.
Nabata gị nleta! Anyị na-atụ anya ịkwado gị!